COVID-19 Wuxuu ku fidaa Iowa, Iskuullada ayaa xiran illaa Abriil 30 | KWIT
Tirada dadka reer Siouxlanders ee saamayntu sidoo kale way kordhay. Waxaa jira kiisas cusub oo la xaqiijiyay in Woodbury, Monona iyo hadda Dickinson County oo ah sideed qof. Dhammaan kiisaska cusub waxay ku lug leeyihiin dadka da'doodu tahay 61 sano ama ka weyne
Imtixaanka wadida ee COVID-19 wuxuu bilaabmay Jimcaha Gobolka Woodbury.
Laakiin, tijaabadu qof walba diyaar uma ahan. Waxaa lagu qabtaa goob aan la shaacin oo loogu talagalay bukaannada iyadoo talooyin ay ka helaan dhakhaatiirta ay soo sheegaan.
Lambarrada cusub ee maanta, Gobolka Woodbury wuxuu leeyahay seddex kiis oo la xaqiijiyay.
Waxaa jira war wanaagsan marka laga hadlayo hargabka ee Nebraska. Hay'ada CDC waxaay sheegtey in howlihu isu beddeleen mid baahsan oo u gudbey gobolka. Taasi waa lamid tii South Dakota. Iowa wuxuu wali arkaa caabuq baahsan.
Lambarrada shaqo la'aanta ee bishii Febraayo ayaa la siidaayay maanta, bishii hore Iowa wuxuu arkay xaddiga 2.8%, heerka Nebraska wuxuu ahaa 2.9%.
Jimcihii, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay ku dartay 56 xaaladood oo kale oo fiican oo iskucelcelis ah 235. Waxaa jira isugeyn ah 3,700 baaritaanno xun.
Tirada dadka reer Siouxlanders ee saamayntu sidoo kale way kordhay. Waxaa jira kiisas cusub oo la xaqiijiyay in Woodbury, Monona iyo hadda Dickinson County oo ah sideed qof. Dhammaan kiisaska cusub waxay ku lug leeyihiin dadka da'doodu tahay 61 sano ama ka weyn.
Si kastaba ha noqotee, ka dib xiritaanka si looga hortago faafitaanka COVID-19, sheegashada faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee gobollada Siouxland ayaa cirka isku shareertay isbuucii hore. Iowa waxaa jiray sheegashada 42,000, oo 17 jeer laga soo qaatay isbuucii hore.
Qeybta ugu weyn, in kabadan 13,000, ayaa ka timid qeybta oo ay kujiraan baararka iyo maqaayadaha oo lagu amrey inay xiraan 17-ka Maarso.
Khamiista, ayuu guddoomiyuhu amar ku bixiyay in xiritaanka la maro illaa iyo 7-da Abriil.
Ururka maqaayadaha Iowa wuxuu leeyahay in kabadan 20 boqolkiiba maqaayadaha gobolka waxaa laga yaabaa inaysan soo laaban ka dib cudurkaan.
Nebraska, waxaa jiray ku dhawaad 16,000 sheegashooyin bilow ah oo shaqo la'aan ah oo laga xareeyay gobolka ilaa 799 usbuucii hore.
In kabadan 1,700 oo qof oo ku sugan South Dakota ayaa gudbiyay dacwad sheegasho la'aan shaqo usbuucii lasoo dhaafay, 907 boqolkiiba ayaa kor u kacday 169 sheegashooyinkii la xirey isbuuca ka hor.
Magaalada Sioux City waxay qorsheyneysaa in xarumaha ay ku xirto dadwaynaha ilaa ogeysiis dheeri ah sababtoo ah CVID-19 Faafida.
Taas waxaa ka mid ah Hoolka Magaalada, Khadad Dheer, Madxafka Dadweynaha iyo Xarunta Farshaxanka.
Si kastaba ha noqotee, magaaladu weli si buuxda ayey u shaqeyneysaa waxayna u qabataa ballamo ganacsi oo ku saleysan saldhigyo xaddidan. Wali waxaa jiri doona adeegga qashinka iyo dib u warshadeynta, baska garoonka diyaaradaha ayaa wali furan.
Xarunta Adeegga Macaamiisha ayaa kordhisay ka tanaasulaadda dhammaan ganaaxyada iyo khidmadaha biilasha adeegga iyo ganaaxa baarkinka illaa iyo Abriil 30.